Ikona Yevumba - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguBarrie
Yonwabela iholide entle nezolileyo xa ubuka iHeathcote, iindawo zayo zokwenza iwayini neendawo ezikufutshane nayo. Kukho iindawo ezininzi zokwenza iwayini ezikumgama omfutshane ngemoto, kwaye nakwezinye izitrato eziphakamileyo onokuya kuzo!
Iflethi yethu ye-granny ilungele abantu abathandanayo ukuba bahambe eMelbourne - ibe siza kukuvumela ukuba uze nenja yakho!
Eli gumbi lokulala linokufikeleleka lithe nca kwindlu enkulu, kodwa awuzukuyazi xa ungaphakathi kwaye ubuka ngaphandle xa ubona iNtaba i-Ida kumantla.
Qaphela: yonke iminyango ivuleke
nge-920mm Ngenxa yokuba ilungele izilwanyana zasekhaya, izilwanyana zasekhaya zamkelekile ngaphakathi, ifenitshala entsha ivuatherette (ecoceke lula) kwaye inomgangatho onzima - ayikho ikhaphethi.
Igumbi lokulala - linokulungiswa ngeebhedi ezimbini okanye ibhedi enkulu - sazise nje kwangaphambili. Kukho idesika encinci, i-TV eyi-43 ", isipili eside kunye nokuhamba ngewodrophu.
Igumbi lokuhlambela - elinendawo yokuhlambela, isipili esikhulu, indlu yangasese nendawo enkulu yeshawa enamakhethini.
Indawo yokuhlala - isofa yezihlalo eziyi-2, itafile yekofu, iyunithi ye-tv, i-Blu-Ray/i-DVD player, i-TV eyi-43 ", isixhobo sokutshisa iinkuni, itafile yokutyela
Indawo yekhitshi - umphezulu wokupheka, ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, isinki emibini, ifriji/i-freezer
Indawo yokungena eyintloko - iyakwazi ukusetyenziswa (akukho zitepsi) enendawo yokutshixa ye-Yale emnyango
Ngaphandle - ukhululekile ukuhlola indlu eyi-10 acre, isiqingatha sazo esinehlathi lendalo. Kodwa ke, lumka kubahlali basekuhlaleni - ii- kangaroos, ii-ravailaits kunye nenyoka ngamaxesha athile (kuxhomekeke kwixesha lonyaka)
Bonisa zonke izinto eziyi-9
I-Heathcote likhaya leendawo zewayini ezingaphezu kwe-50, nganye inento ekhethekileyo yokukutsala. Beka phakathi kweendawo ezintle, uza kufumana ubugcisa obunomtsalane kunye neminyango yendawo yokuhlala etofotofo, kwaye udibane nabenzi bewayini abanobubele nabasebenza nzima.
Umbuki zindwendwe ngu- Barrie
Sihlala kwindlu encanyathiselwe kuyo ibe siyafumaneka ukuba kuyimfuneko. Asiyi kusebenzisa indawo yokungena yangaphambili xa iindwendwe zihlala, ngoko awuzukwazi ukuba sikhona!